Ny fambolena tsara indrindra dia mampiasa ny mpamokatra sy ny mpamokatra PP Spunbond Nonwoven | Henghua
Ny fambolena dia mampiasa PP Spunbond Nonwoven
Ny lamba tsy voatenona amin'ny fambolena dia matetika vita amin'ny kofehy filamenan'ny polypropylene amin'ny alàlan'ny fanerena mafana. Izy io dia manana permeability rivotra madio, fitehirizana ny hafanana, fitazonana ny hamandoana ary famindrana hazavana vitsivitsy.
1.Ny lamba tsy tenona kolontsaina amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny kofehy filamenan'ny polypropylene amin'ny alàlan'ny fanerena mafana. Izy io dia manana permeability rivotra tsara, mitahiry hafanana, mitazona ny hamandoana ary mamindra hazavana sasany.
2.Ity dia taranaka vaovao mifandraika amin'ny tontolo iainana fitaovana, izay manana ny mampiavaka ny rano repellency, breathability, manovaova, tsy mora may, tsy mahasosotra, ary manan-karena loko. Raha apetraka eny ivelany sy simba voajanahary ny fitaovana, ny lamba tsy tenona dia manana fahazavana lavitra kokoa noho ny horonantsary plastika, ary ny famafana ny hafanana amin'ny faritra taratra alina dia miankina amin'ny taratra onja lava lava; ka rehefa ampiasaina ho toy ny ambainy faharoa na fahatelo dia afaka manatsara ny trano fonenana, ny mari-pana entin'ny trano fonenana sy ny mari-pana amin'ny tany dia misy fiatraikany amin'ny fampitomboana ny famokarana sy ny vola miditra.
3.Ny tenona tsy tenona dia fitaovana firakotra vaovao, matetika aseho amin'ny grama isaky ny metatra toradroa, toy ny 20 grama isaky ny metatra toradroa tsy vita tenona, 30 grama isaky ny metatra toradroa tsy vita tenona, sns. Mihena ny fandefasana hazavana rehefa mitombo ny hateviny. Ny haben'ny rivotra azo avy amin'ny lamba tsy vita tenona amin'ny fambolena dia mihena miaraka amin'ny fitomboan'ny hateviny, ary mitombo miaraka amin'ny fitomboan'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra ivelany sy ny fitomboan'ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana eo anatiny sy ivelany. Ankoatry ny fitarihan'ny hateviny sy ny haben'ny harato, ny ambaratonga fanamafisam-peo amin'ny lamba tsy vita amin'ny fambolena dia mifandraika amin'ny anton-javatra ivelany toy ny toetr'andro sy ny endrika firakotra. Ny ambany ny mari-pana ivelany, ny tsara kokoa ny vokatra fiarovana ny hafanana; ny tsara kokoa ny fiarovana ny hafanana vokatry ny firakofana ao amin'ny tranoona.
Miankina amin'ny hateviny, ny haben'ny harato, ny lokony ary ny famaritana azy hafa, dia azo ampiasaina ho fitehirizana ny hafanana sy fitaovam-panakonana hamandoana, fitaovan'ny masoandro, fanamoriana ambany, akora fonosana sns.
Ny loko samihafa amin'ny lamba tsy tenona dia samy hafa ny vokan'ny alokaloka sy ny hatsiaka. Amin'ny ankapobeny, ny lamba mahia tsy misy tenona 20-30 g / m² dia manana fatran'ny rano be sy azo ahodin-drivotra ary maivana ihany. Izy io dia azo ampiasaina hanaronana ny velaran-tany mitsingevana eny an-tsaha sy ny trano fandraisam-bahiny, ary azo ampiasaina ihany koa ho an'ny kianja malalaka, ny trano heva lehibe, ary ny efijery fikolokoloana hafanana ao amin'ny tranoona amin'ny alina. Izy io dia manana ny asan'ny fitehirizana ny hafanana ary afaka mampiakatra ny mari-pana amin'ny 0,7 ～ 3.0 ℃. 40-50g / m2 lamba tsy tenona ho an'ny trano fandraisam-bahiny dia ambany ny fahitan'ny rano, ny tahan'ny alokaloka ary ny kalitaony mavesatra. Ampiasaina matetika izy ireo ho toy ny efijery fisisahana hafanana amin'ny trano heva lehibe sy trano fandraisam-bahiny. Azo ampiasaina ihany koa izy ireo fa tsy sarona ambain-mololo handrakofana ireo trano heva kely hanatsarana ny fitehirizana ny hafanana. . Ny lamba tsy misy tenona toy izany ho an'ny trano fandraisam-bahiny dia mety ihany koa amin'ny fambolena zana-ketsa alokaloka amin'ny fahavaratra sy amin'ny fararano. Ny lamba matevina tsy misy tenona (100 ～ 300g / m²) dia manolo ny ambain-mololo sy ny bozaka ary ny sarimihetsika momba ny fambolena dia azo ampiasaina amin'ny fandrakofana maro sosona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny.
Teo aloha: Ny lamba an-trano dia mampiasa PP Spunbond Nonwoven
Manaraka: Fampiasana ara-pahasalamana PP Spunbond Nonwoven
Fonosana tsy vita amin'ny fambolena
Lamba tsy vita amin'ny fambolena
Vokatra amin'ny fambolena
Fambolena tsy voafafa
Lamba fambolena tsy lalivay
Fampiasana ara-pahasalamana PP Spunbond Nonwoven
Fonosana sy fonony mampiasa PP Spunbond Nonwoven
Ny lamba an-trano dia mampiasa PP Spunbond Nonwoven
Lamba tsy tenona, Vidin'ny lamba lamba, Lamba tsy vita tenona Polypropylene, Lamba tsy misy tenona polypropylene Spunbond, Pp lamba tsy tenona, Fitaovana tsy tenona,